A kagbuola Terraria maka Stadia dị ka onye kere ya Spinks | Gam akporosis
A kagburu ọdụ ụgbọ mmiri nke Terraria na Stadia mgbe onye okike nwere egbochi akaụntụ Google
Manuel Ramirez | | Egwuregwu gam akporo, Noticias
Ugbu a anyị nwere ike gaa ije n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Terraria na Stadia N'ihi na onye kere ya ahụla ihe ndekọ Google ya niile, ma dịka mmeghachi omume, ọ kagburu ọrụ ahụ nke ga-eme ka anyị nwee ike igwu otu igbe kacha mma ugbu a site na ikpo okwu egwuregwu a; dika ihe bụ oké Geforce UGBU a na Chrome.
Eziokwu ahụ o juru anyị anya site na mkpebi dị otu a site na onye okike nke Terraria, na ịmatakwu na mgbe Google na-egbochi akaụntụ ọ na-ewe gị n'okporo ámá nke obi ilu iji weghachite ya dịka ọ ga-eme onye ọ bụla na mbara ala a.
Nsogbu nke ihe a na - eme onye okike nke Terraria nwere ike ịpụta na ọ na - aba ụba n'ụzọ dị otú a na ọ na-akagbu ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri nke egwuregwu sandbox a maka Stadia.
Enweghi m ihe ọ bụla mebiri usoro ọrụ gị, yabụ enweghị m ike iburu nke a karịa ụzọ ị ga-esi gbaa akwa a ọkụ. Tụlee ya ọkụ. #Terraria n'ihi na @GoogleStadia akagbuo. Companylọ ọrụ m agaghịzi akwado nyiwe gị ọ bụla na-aga n'ihu.
- Andrew Spinks (@Demilogic) ụlọ February 8, 2021
Dị ka amaara, mbata nke Terraria na Stadia leaked urua, na ikekwe na otu nke n'elu ikpo okwu na-abịa blog posts, ọ ga-heralded dị ka a nnukwu mbata.
Andrew Spinks, onye nkwado nke Terraria, kwupụtara mkpebi ịkagbu ọrụ ahụ na akaụntụ Twitter ya. Kọwaa otu ihe ahụ a na-egbochi akaụntụ Google gị maka izu 3, nke na-egbochi gị ịnweta akaụntụ Gmail gị nke ya na ya nọ kemgbe afọ 15, ọtụtụ puku dollar na Storelọ Ahịa Play na ịzụta, yana data niile echekwara na igwe ojii Google.
Nsogbu Ọ malitere mgbe a na-egbochi ọwa YouTube nke Terraria. Spinks na-ekwu na ya emebeghị ihe ọ bụla iji gbochie akaụntụ ya, yabụ emeela mkpebi ahụ na ọ gaghị ewepụta ọrụ ya ọ bụla na ikpo okwu ọ bụla jikọrọ Google.
Mgbe Terraria maka Stadia yiri ka akagbuola ya, otu ihe maka gam akporo na gam akporo TV dị; echefula otu esi map chromecast remote ka google tv ịnụ ụtọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A kagburu ọdụ ụgbọ mmiri nke Terraria na Stadia mgbe onye okike nwere egbochi akaụntụ Google
Samsung Galaxy F62 nwere batrị 7000 mAh ga-ebido na February 15
Ugbu a dị na Spain Galaxy A32 5G